Nadiifiyeyaasha ugu raqiisan 2022: hagaha iibka iyo soo jeedinta cajiibka ah
nadiifiyaha faakuumka jaban
Aniga ayaa igu riyooday
xaaqin vacuum nadiifiye
bac ma leh
leh shaandhada biyaha
Loogu talagalay xayawaanka rabaayada ah
nadiifiyaha vacuum mini
Waxaad rabtaa iibso faakuum nadiifiye raqiis ah? Suuqa nadiifiyaha nadiifiyaha ayaa si xawli ah u koray sannadihii la soo dhaafay. Waxaan awoodnay inaan aragno sida xulashada nadiifiyeyaasha vacuum ee suuqa ay u koreen. Waxaa jira noocyo iyo noocyo badan oo kala duwan oo la heli karo. Dhammaantood waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah oo marar badan waxay leeyihiin adeegsi gaar ah, laakiin xulashada ayaa aad u ballaaran. Markaa isticmaalayaashu waxay leeyihiin wax badan oo ay ka doortaan.
Markaan u tagno inaan soo iibsano nadiifiye cusub, doorashadu way adkaan kartaa. In kasta oo ay jiraan dhawr arrimood oo macmiil kastaa rabo. Waxaan rabnaa nadiifiye tayo leh laakiin aan qaali ahayn. Taasi badanaa waa rabitaanka dadka intiisa badan. Sababtan awgeed, waxaan hoos kuugu dhaafnay xulashada nadiifiyeyaasha faakuumka oo jaban.
Dhammaantood waa noocyo tayo leh laakiin qiimahoodu waa la heli karaa. Markaa dib u cusboonaysiinta faakuumeeyahaaga uma malaynayso dadaal xad dhaaf ah. Waxaan kuu sheegaynaa wax badan oo ku saabsan dhammaan moodooyinkan hoose.
Nadiifiyeyaasha ugu raqiisan
Waxaan sameynay xulasho dhowr nooc ah. Dhammaantood waa moodallo u taagan in ay haystaan ​​qiimo aad u badan oo la heli karo isticmaalayaasha, laakiin la'aanteed taas macnaheedu waa ka tanaasulida tayada. Hoos waxaan kuugu daynaynaa miis leh tafatirka ugu faahfaahsan ee mid kasta oo ka mid ah moodooyinkan. Miiska ka dib waxaan uga hadalnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah si gaar ah si faahfaahsan.
Thanks to xogtan waxaad heli kartaa fikrad cad oo ku saabsan moodelkee noqon kara midka aad xiisaynayso iibsashada.
Cecotec Robot Vacuum Cleaner iyo...
Robot-ka Lefant F1 Vacuum...
Nadiifinta xaaqinka oo aan lahayn...
Taurus Hooyo Aan dhammaanayn -...
Cecotec Vacuum nadiifiyaha oo aan lahayn...
Nadiifiyeyaasha ugu raqiisan ee nadiifiyaha ah
1 Nadiifiyeyaasha ugu raqiisan
2 Nadiifiyeyaasha ugu raqiisan ee nadiifiyaha ah
2.3 Cecotec Boodhka Easy Conga
2.7 AmazonBasics vacuum
2.8 VicTsing Nadiifiyaha Gacmo La'aanta ah
2.9 Ciidanka Cirka ee Rowenta Extreme RH8828
3 nooca hammiga
3.6 ka dambaska
3.7 2 ee 1
3.8 bac ma leh
4 Noocyada nadiifiyaha vacuum ee ugu fiican
5 Sida loo doorto nadiifiyaha vacuum
5.2 Ku daray
5.3 Noocyada shaandhaynta
5.5 Ma jiraan wax ku qanciya?
Marka la muujiyo qeexitaannada ugu muhiimsan ee mid kasta oo ka mid ah nadiifiyeyaashan faakuumka, waxaan hadda sii wadi karnaa inaan si qoto dheer uga hadalno mid kasta oo ka mid ah moodooyinkan. Sidan ayaad wax badan uga baran kartaa moodooyinkan iyo hawlgalkooda. Sidaa darteed, haddii uu jiro mid ku habboon baahiyahaaga, waxaad awoodi doontaa inaad isla markiiba ogaato.
Waxaan liiska ku furnay qalabka nadiifiyaha robot-ka ah ee Cecotec, oo ah astaan ​​caan ku ah waaxda soo saarista nadiifiyaha faakuumka ee robotka. Waa nooc, sida dhammaan robots-yada, waa ikhtiyaar aad u raaxo leh. Sababtoo ah waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa barnaamij oo waxay bilaabeysaa nadiifinta sagxadaha gurigayaga. Waxay ku nadiifisaa afar jeer waxayna leedahay wadarta 6 hababka nadiifinta. Ma aha oo kaliya faakuum, laakiin sidoo kale xaaq iyo xaaqin. Sidaa darteed, samee nadiifin aad u dhamaystiran oo guriga ah. Intaa waxaa dheer, waxay si fiican ugu shaqeysaa dhammaan noocyada dabaqyada.
Markaad nadiifinayso agagaarka guriga, iyada oo ay ugu wacan tahay tignoolajiyada, kuma dhici doonto alaabta guriga, dadka, geesaha ama hoos uma dhici doonto jaranjarooyinka. Sidaa darteed, waan iska fadhiisan karnaa oo u ogolaan karnaa robot-ku inuu qabsado shaqadiisa. Waxay leedahay baytari ku siinaysa qiyaas dhan 160 daqiiqo. Marka batarigu qarka u saaran yahay inuu dhammaado, robot-ku si toos ah ayuu ugu soo noqdaa salkiisa si uu si buuxda ugu dallaco. Markaa ma aha inaan ka walwalno taas. Waxay leedahay haan awood sare leh, taas oo noo ogolaanaysa inaan faaruqiyo guriga oo dhan anagoon u baahnayn inaan faaruqin.
Shaandheyn ahaan waxay leedahay shaandhada HEPA, tani waxay la macno tahay inaan si fudud u nadiifin karno. Kaliya dhig tuubada hoosteeda oo ha engegin. Sidaa darteed, mar horeba waa nadiif oo diyaar u ah in mar kale la isticmaalo. Waa hab aad u raaxo leh oo noo ogolaanaya inaan lacag ku badbaadinno filtarrada. Robot-kani sidoo kale wuu soo baxay sababtoo ah ma aha buuq. Robot-ku waxa uu la socdaa qalabyo ay ku jiraan dhawr burush, saldhigga dallaca, kontoroolka fog iyo adabtarada.
In kasta oo aysan ahayn ka kaliya ee liiskan ku jira, mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee nadiifiyaha sagxada Ecovacs waa in ay ku habboon tahay Alexa iyo codsiyada mobilada, si aan u ogaan karno halka ay joogto mar walba. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay nooc kale oo sirdoon ah, kiiskan Smart Navi 3.0 Navigation kaas oo ka shaqeeya mahadnaqa laser kaas oo kuu ogolaanaya inaad ogaato meesha aad u socoto iyo samee khariidad gurigeena.
Sida aan soo sheegnay, oo leh abka ECOVACS carqaladaha dalwaddu waxa laga samayn karaa mobaylka in mudnaanta la siiyo ama la xannibo aagagga si uu robotku u nadiifiyo kaliya meesha aan rabno. Dhanka kale, waxaan isticmaali karnaa mid ka mid ah afarta nooc ee nadiifinta si aan u hubinno inay nadiifiso meesha, sida iyo goorta aan rabno.
Cecotec Boodhka Easy Conga
Meesha labaad waxaan ka helnaa moodelkan isla astaanta, inkasta oo markan yahay nadiifiyaha 2-in-1. fadhiga fadhiga ama kuraasta baabuurka. Waad ku mahadsan tahay tan waxaan samayn karnaa nadiifin qoto dheer oo guriga ah. Waxay u taagan tahay isticmaalka tignoolajiyada duufaanka, tignoolajiyada siinaysa awood badan. Intaa waxaa dheer, tani waxay ka dhigan tahay in aysan lumin awoodda waqti ka dib. Wax siinaya nasasho maskaxeed oo badan isticmaalayaasha.
Waa moodal iftiin ah oo aad u fudud in guriga lagu isticmaalo. Waa miisaan yar, taas oo ka dhigaysa mid aad loo maamuli karo. Gaar ahaan haddii aan leenahay guri jaranjaro leh, si aysan u dhibin in meel laga soo qaado oo meel kale loo qaado. Habkani wuxuu ku shaqeeyaa fiilooyinka, fiilada uu leeyahayna waxay qiyaastaa 6 mitir. Markaa waxaan si raaxo leh ugu wareegi karnaa guriga iyo inta u dhaxaysa qolalka anagoon si joogto ah u xidhin oo ka bixin. Intaa waxaa dheer, nadiifiyaha xaaqinkan wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa dhammaan noocyada dusha sare, oo ay ku jiraan sagxadaha alwaax.
Waxay leedahay dhigaal leh 1 litir. Tani waxay ina siinaysaa awood ku filan oo aan ku nadiifin karno guriga oo dhan hal mar wax ka badan dhib la'aan. Intaa waxaa dheer, soo saarista haanta waa mid aad u fudud waana sida aan u nadiifinno. Tani waxay sidoo kale ku dhacdaa filtarrada, kuwaas oo dayactirkoodu fudud yahay. Maadaama ay tahay shaandhada HEPA. Sidaa darteed, waa inaan si fudud u nadiifinnaa iyaga. Marka la eego qaylada, maaha kan ugu caqli badan, laakiin waxa ay dhalisaa tiro la mid ah qaylada nadiifiyaha caadiga ah. Aad bay u fududahay in la kaydiyo sababtoo ah si dhib ah ayay u qaadanaysaa wax boos ah. Nadiifiyahan faakiyuumku waxa uu la socdaa dhowr nozzles oo dheeraad ah oo lagu daray.
Meesha saddexaad waxaan ka heleynaa nadiifiyaha nadiifiyaha ah ee Rowenta ee dhaqameed, ugu yaraan marka la eego naqshadeynta. Waxay ka dhigtaa isticmaalka tignoolajiyada duufaanka, taas oo siinaysa awood weyn iyo awood nuugista. Intaa waxaa dheer, ma lumin awooddan waqti ka dib. Sidaa darteed, waxaan ku raaxaysan karnaa isticmaalkeeda wakhti dheer oo leh raaxada ugu badan. Dammaanad muhiim u ah dad badan. Waxay si aad u fiican ugu shaqeysaa dhammaan noocyada dusha sare, laakiin gaar ahaan si fiican sagxadaha adag (dhagax, tile...). Markaa haddii aad leedahay dabaqa noocaas ah, waa nadiifiye ku habboon iyaga.
Rowenta RO3753 is haysta
Waxay ku shaqeysaa haan leh awood 1,5 litir ah oo aan si fudud u faaruqi karno. Intaa waxaa dheer, waa qadar ku filan oo lagu nadiifin karo guriga oo dhan iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin. Waxa kale oo ay leedahay shaandhada HEPA, taas oo macnaheedu yahay inaan maydhi karno. Kaliya geli shaandhada tuubada hoosteeda si aad wasakhda uga saarto. Marka tan la sameeyo, waxaanu u ogolaanay inay engegaan oo ku celiyaan nadiifiyaha. Waxaas oo dhan iyada oo aan weligeed la lumin awoodda nuugista. Nadiifiyaha vacuum ee Rowenta waa xarig, wuxuu leeyahay xarig 6,2 mitir ah. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan si fudud ugu wareegno guriga.
Waxa uu miisaankiisu yahay 6,8 Kg, laakiin ha ku kadsoomin sawirka, sababtoo ah waa nooc sahlan oo lagu maareeyo oo lagu wareego guriga. Waad ku mahadsan tahay naqshadeeda taayirada leh, waa nadiifiye aad u sarreeya oo guurguura. Intaa waxaa dheer, marka ay timaado kaydinta ma qaadanayso meel aad u badan, markaa way fududahay in la helo meel lagu kaydiyo. Waxay abuurtaa dhawaaq la mid ah nadiifiyaha faakuumka caadiga ah, markaa ma jiraan wax la yaab leh oo ku saabsan arrintaas. Ma aha buuq aad u dhib badan.
Meesha afraad waxaan ka helnaa nadiifiyahan faakuumka oo isticmaalkiisa ugu weyn uu noqon doono nadiifiyaha faakuumka warshadaha, inkastoo aan u isticmaali karno xaalado badan oo kala duwan. Laakiin, waxay u taagan tahay gaar ahaan inay noqoto nooc aad u awood badan oo bixiya awood nuugid oo weyn. Sidan oo kale waxaad awoodi doontaa inaad ka saarto dhammaan wasakhda urursan si fudud oo waxtar leh. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale la shaqeysaa wasakh qoyan, sidaas darteed waxay noo ogolaaneysaa isticmaalka badan oo badan marka loo eego nadiifiyaha caadiga ah ee arrintan la xiriira. Sidaa darteed waa mid aad u badan.
Waxay leedahay haan weyn oo awood leh, waana sababta loogu talagalay isticmaalka warshadaha halkaasoo wasakh badani ku ururto. Tani waxay ina siinaysaa ikhtiyaarka ah inaan awoodno inaan nadiifinno meelo waaweyn adoon faaruqin dhowrkii daqiiqoba mar. Markaa nadiifintu aad bay uga waxtar badan tahay dhinac kasta. Marka lagu daro faakuumaynta, waxa kale oo ay leedahay shaqo afuufis ah oo si fiican u shaqeysa. Markaa waxaad samayn kartaa nadiifin aad u qoto dheer.
Waa moodel miisaankiisu yahay 7,66 kg. Laakin, inkasta oo tiradan ay jirto, waa nooc aan si fudud u maarayn karno. Intaa waxaa dheer, mahad naqshadeeda afarta taayir, waa mid aad u guurto oo aad u deggan. Sidaa darteed, ma dhacayso ama ma dhammaan doonto wakhti kasta inta aan isticmaaleyno. Markaa waxaanu danaynaa oo kaliya nadiifinta. Waxay leedahay fiilada dhererkeedu yahay 4 mitir. Ma aha tan ugu dheer, laakiin waxay na siinaysaa dhaqdhaqaaq ku filan.
Braava 390t waxaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo qolal badan oo waaweyn. Waxay leedahay kaadhka xoqidda saddex-laab ah iyo iadapt 2.0 oo leh xabadaha navigation taaso ka caawinaysa robotkan yar inuu la socdo meesha uu ku yaal. Ikhtiyaar ahaan, waxaan dooran karnaa hal baas haddii aan kaliya rabno inaan ka saarno wasakhda, boodhka, timaha xayawaankayaga iyo xasaasiyadaha ama isticmaal baas saddex geesood ah si aan u xoqno ilaa 33m²
Dhanka sifooyin kale, waxaa ku jira 4 maro yar yar, kuwaas oo laba ka mid ah loo isticmaalo xoqidda iyo laba ka mid ah xaaqin, taas oo macnaheedu yahay in xaaqin qallajin kara.
Qaabka soo socdaa waa nadiifiyaha faakuumka caadiga ah kaas oo u taagan bixinta hawl hufan oo aan dhibaato lahayn. Waa nooc aad u qadiimi ah oo lagu sameeyo nadiifinta guriga. Waxay noo ogolaataa inaan ku faaruqno dhammaan noocyada dabaqyada waxayna leedahay awood ku filan. Ma aha kan ugu awooda badan liiska, laakiin kama tago wax wasakh ah iyada oo aan la faaruqin wakhti kasta. Markaa si fiican ayay u fulisaa hawsheeda mar kasta.
Aasaaska Amazon –...
Waxay leedahay haan leh awood 1,5 litir ah, taas oo noo ogolaanaysa inaan nadiifinno guriga dhowr jeer ilaa uu ka buuxo. Soo saarista iyo nadiifinta deebaajigani waa mid aad u fudud. Markaa uma baahna dayactir badan. Isla wax la mid ah ayaa ku dhaca filtarka HEPA ee ay ku jirto. Marka aan ogaano in ay leedahay wasakh badan oo urursan, waxaa fiican in la qoyo, ha qallajiso oo mar kale isticmaasho. Sidan oo kale waxay ku soo noqotaa inay yeelato awoodda nuugista ugu badan sida maalinta ugu horreysa. Hab aad u fudud.
Waxay ku shaqeysaa fiilooyinka, kiiskan wuxuu leeyahay fiilada 5 mitir. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan si raaxo leh ugu wareegno guriga waxayna ina siinaysaa xoriyad badan. Dhanka miisaanka, qaabkani wuxuu miisaankiisu yahay 4,5 kg. Sidaa darteed, maaha mid ka mid ah nadiifiyeyaasha ugu culus, si ay u sahlanaato in lagu wareego guriga oo nala qaado haddii ay tahay in aan fuulno jaranjarooyinka. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeeda taayirada, waa mid aad u guura, sidaas darteed, looma baahna in la welwelo oo la qaado mar kasta. Waxay dhalisaa sanqadh la mid ah tan nadiifiyaha caadiga ah. Intaa waxaa dheer, qaabkani wuxuu la socdaa qalabyada lagu daray.
VicTsing Nadiifiyaha Gacmo La'aanta ah
Meesha ugu xun waxaan ka helnaa nadiifiyaha gacanta ee gacanta lagu hayo. Nadiifiye xajmi yar leh oo naloogu talagalay in aan ku isticmaalno meelaha aanu nadiifiyaha caadiga ahi gaadhi karin. Sidaa darteed, waa doorasho weyn in loo isticmaalo fadhiga fadhiga ama kuraasta baabuurta. Goobaha nadiifintoodu xoogaa ka adag tahay una baahan saxnaan weyn. Thanks to model this aad bay u fududaan doontaa in la gaaro meelahan si ay mar walba nadiif u noqdaan.
Qaabka cabbirka yar wuxuu leeyahay awood badan. Markaa waxay naga caawin doontaa inaan ku dhameyno xitaa wasakhda ugu adag. Markaa fadhiga fadhiga wuxuu had iyo jeer noqon doonaa mid dhalaalaya. Intaa waxaa dheer, miisaankeedu aad ayuu u yar yahay, taas oo ka dhigaysa isticmaalkeeda mid aad u fudud oo fudud. Waa mid aad loo maareyn karo, taas oo sidoo kale wax badan ka tareysa, maadaama hawsha nadiifinta meelahan aan had iyo jeer fududayn. Habkani wuxuu u shaqeeyaa iyada oo aan lahayn fiilooyinka. Waxay leedahay batari leh madax-bannaani 30 daqiiqo oo aan ku dallaci karno.
Waxay leedahay deebaaji aan ku faarujin karno wakhti kasta si fudud. Intaa waxaa dheer, nadiifinteeda iyo dayactirkeeda waa mid aad u fudud. Si la mid ah filtarka ku jira. Waa filtar la dhaqi karo. Markaa markaan aragno inay lumiso xoogaa koronto ah, waxaan ku maydhnaa shaandhada tuubada hoosteeda, ha qallajiso oo dib u dhigno. Sidaa darteed, waxay si fiican u shaqeysaa mar kale. Waxaa ka mid ah qalabyo dhowr ah, sida nozzles ee dusha iyo shaqooyinka kala duwan.
Ciidanka Cirka ee Rowenta Extreme RH8828
Meesha ugu danbeysa waxaan ka helnaa nadiifiyaha xaaqinka Rowenta. Waa nooc la yaab leh sababtoo ah waa mid aad u awood badan, si aan u awoodno inaan tirtirno boodhka iyo wasakhda ku urursan gurigayaga. Waxay si aad u fiican ugu shaqeysaa dhammaan noocyada dusha sare iyada oo ay ugu wacan tahay burushkeeda, oo loogu talagalay in sidaas la sameeyo. Sidaa darteed, xitaa haddii aad leedahay dabaqyo alwaax ah, waxaad isticmaali kartaa adigoon walwalin. Waxay noo dammaanad qaadaysaa nadiifin wax ku ool ah oo waarta.
Ciidamada Cirka ee Rowenta
Habkani wuxuu u shaqeeyaa iyada oo aan lahayn fiilooyinka. Waxa ay leedahay baytariga ugu badnaan 45 daqiiqo. Waqti ku filan in lagu nadiifiyo guriga oo dhan. Marka batteriga la dhammeeyo, waxaanu saaraynaa dallacaadda. Waxay qaadataa ilaa siddeed saacadood in si buuxda loo dallaco, taas oo noqon karta mid aad u dheer. Sidaa darteed, way fiicantahay in had iyo jeer la dalaco habeenkii. Markaa waxaad diyaar u tahay subaxdii haddii aad u baahan tahay inaad nadiifiso guriga. Habkani waxa uu leeyahay haan la saari karo oo awood 0,5 litir ah.
Waxay kaloo leedahay filtar HEPA ah oo aan nadiifin karno. Markaa waa inaad ku qoyso tuubada hoosteeda, ha qallajiso oo dib ugu celiso. Waad ku mahadsan tahay tan waxaan mar labaad ku raaxaysan karnaa nadiifiyaha faakuumka sidii inay tahay maalintii ugu horreysay oo ay ku faaruqayso awood iyo saxnaan weyn. Marka loo eego qaylada, waxay samaysaa buuq ka badan moodooyinka kale ee liiska ku jira, inkasta oo aanay ahayn buuq dhibsan ama madax xanuun.
Sidaan horay u soo sheegnay, waxaa jira noocyo badan oo nadiifin ah oo maanta jira. Mid kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka dhigaya inay ku roonaadaan xaaladaha qaarkood. Sidaa darteed, way ku habboon tahay in la caddeeyo nooca vacuum cleaner ee aan u baahanahay ama aan raadineyno. Maadaama ay ka dhigi doonto raadintayada mid sax ah. Hoos waxaan kaaga sheegaynaa wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee nadiifiyeyaasha faakuumka.
Faakuum nadiifiyaha caarada
nadiifiye dareere ah
nadiifiyaha vacuum ee xayawaanka
nadiifiyaha vacuum ee warshadaha
Nadiifiyeyaasha faakuumka aan lahayn xadhig
Dambas faaruq ah
nadiifiyaha vacuum filter biyaha
nadiifiyaha vacuum nadiifiye
nadiifiyaha vacuum ee gacanta lagu qaato
nadiifiyaha faakuumka boorsada
Robot vacuum cleaner iyo xaaqin
Fiiri nadiifiyaha vacuum nadiifiyaha
Kuwani waa nadiifiyeyaasha vacuum ee dhaqameed ee aan wada ognahay. Dareenkan, waxay ilaalinayaan qaabka iyo qaabka caadiga ah. Inkasta oo tignoolajiyadu ay aad u horumartay oo ay inta badan ka casrisan yihiin kana awood badan yihiin. Waxay yihiin moodallo si fiican uga shaqeeya dhammaan noocyada dusha sare oo aynaan ku faaruqin boodhka guriga, laakiin sidoo kale dhammaan noocyada wasakhda ah.
Fiiri nadiifiyaha xaaqinka
Nadiifiyeyaashaani waxay u taagan yihiin ku dayashada qaabka xaaqinka. Markaa waa kuwo toosan oo dhaadheer. Badana waxay ku shaqeeyaan awoodda batteriga oo xoogaa way ka awood yar yihiin nadiifiyaha caadiga ah. Inkasta oo ay u taagan yihiin iftiin, la maarayn karo iyo daaweyntooda dusha sare ee weyn.
Eeg robot vacuum cleaner
Fasal aad u soo badanaya sannadihii u dambeeyay. Waxay yihiin doorasho aad u raaxo badan tan iyo waxa kaliya ee aan sameyno waa barnaamij iyo robot-ka ayaa daryeeli doona nadiifinta guriga annaga. Waxay ku shaqeeyaan baytariyada waxayna had iyo jeer u taagan yihiin qaabkooda wareegsan ee qaabka saxanka. In kastoo, ay sidoo kale si muuqata uga qaalisan yihiin nadiifiyaha caadiga ah.
Kuwani waa nadiifiyeyaal yar yar oo aad si raaxo leh gacantaada ugu qabsan karto. Waxa loo qorsheeyay inay gaadhaan geesaha aanu nadiifiyaha caadiga ahi gaadhin, sida kuraasta baabuurta ama fadhiga fadhiga. Waa kuwo la maarayn karo, miisaankoodu yar yahay, qiimahooduna caadi ahaan waa raqiis. Qaar ka mid ah faakuumyada ulaha waxay la yimaadaan faakuum gacanta lagu dhex dhisay.
Fiiri nadiifiyaha vacuum ee gacanta lagu qaato
Fiiri nadiifiyeyaasha faakuumka duufaanka
Nadiifiyeyaasha vacuum ee Cyclonic waxay u taagan yihiin abuurista dabayl cirwareen ah oo kordhisa awoodda nuugista, waxay caawisaa inay si fudud u kala soocaan wasakhda iyo sidoo kale ma lumin waxtarka waqti ka dib.
Fiiri nadiifiyaha dambaska
Nadiifiyeyaasha noocaan ah waxaa loogu talagalay in lagu nuugo dambaska meelaha dabka lagu shido, barbecues ama noocyada kale ee waxqabadyada kuwaas oo keena ururinta dambaska. Waxay leeyihiin isticmaal aad u gaar ah, inkastoo ay sidoo kale nuugaan boodhka iyo wasakhda. Laakiin hawsheeda ugu weyn waa in laga takhaluso dambaska ama balka.
Fiiri 2-in-1 vacuum cleaners
Kuwani waa nadiifiyeyaasha faakuumka oo aan ka helno faakuum nadiifiye weyn iyo mid gacanta lagu haysto. Guud ahaan waa moodooyin xaaqin ah oo la socda nadiifiye gacan ku xidhan oo isku xidhan. Markaa waxaad si sax ah u nadiifin kartaa guriga oo dhan. Maadaama aad haysato faakuum nadiifiyaha sagxadaha iyo mid kale oo loogu talagalay meelaha sida fadhiga fadhiga ama geesaha aan la heli karin.
Fiiri faakuum nadiifiyeyaasha boorsada aan lahayn
Waa nooc ka mid ah nadiifiyaha vacuum ee aan ku aragno noocyada badankooda. Halkii laga lahaan lahaa bac dhaqameedka lagu kaydiyo wasakhda, waxay haystaan ​​weel la saari karo. Sidan ayaanu marka ay buuxsanto uga soo saarnaa haanta oo aan faarujinno. Sidaa darteed, kuma kharash gareyno lacag bacaha. Intaa waxaa dheer, dayactirka dhigaalkani waa mid aad u fudud.
Fiiri nadiifiyeyaasha faakuumka biyaha
Waxaan wajahaynaa nooc aad u gaar ah oo nadiifiyaha nadiifiyaha ah maadaama ay ku habboon tahay dadka ay dhibaatadu ka haysato xasaasiyadda boodhka ama caarada. Waxay noo ogolaataa inaan nadiifinno guriga, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa in la nadiifiyo hawada iyada oo ay ugu wacan tahay shaandheynta biyaha. Waad ku mahadsan tahay waxaan haysanaa nadiifin qoto dheer oo guriga ah waxaanan hubineynaa in hawada loo ilaaliyo sida ugu macquulsan.
Fiiri nadiifiyeyaasha faakuumka warshadaha
Nadiifiyeyaasha noocaan ah waxaa aad loogu talagalay in lagu nadiifiyo meelaha ganacsiga, hoteelada ama maqaayadaha ama warshadaha. Maadaama ay u taagan yihiin awood weyn oo wax walba nuugi karta. Waad ku mahadsan tahay awooddan, nadiifin aad waxtar u leh oo waxtar leh ayaa la gaaraa. Sidaa darteed, isticmaalka gurigu maaha habka ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo.
Noocyada nadiifiyaha vacuum ee ugu fiican
Markaan raadineyno nadiifiye cusub waxaan aad u eegnaa astaanta. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan rabno inaan iibsano nooc ka mid ah sumad isku mid ah oo aan horey u haysanay ama aan ku sharadno magacyo la yaqaan. Shaki la'aan, calaamaddu waxay leedahay saameyn weyn marar badan. Maadaama aan guud ahaan dooranno noocyo aan naqaan ama aan ku kalsoonahay. Xulashada calaamaduhu waa mid aad u ballaaran maanta, inkastoo ay jiraan qaar ku takhasusay nooc gaar ah oo nadiifiyaha vacuum ah.
Polti vacuum nadiifiye
vacuum nadiifiye riyooday
LIDL faakuum nadiifiye
nadiifiyaha vacuum ee electrolux
Nadiifiyeyaasha vacuum ee Karcher
Waa sumadda soo saaraha ee aaladaha faakuumka ee heerka ugu sarreeya. Yaa aan garanayn qolba faakuum nadiifiye? Waxay suuqa ku jireen ilaa 25 sano, marka waxay leeyihiin khibrad aad u wanaagsan. Intaa waxaa dheer, robots-koodu inta badan waa kuwa ugu horumarsan iyo kuwa bixiya waxqabadka ugu fiican. Markaa haddii aad raadinayso vacuum nadiifiye robot, shaki la'aan waa astaanta ay tahay inaad doorato.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee suuqa. Shirkad leh waayo-aragnimo weyn sannadihii la soo dhaafay, sidaa darteed moodasheeda ayaa dammaanad u ah tayada iyo shaqeynta habboon. Waxay soo saaraan noocyo badan oo nadiifiyaha vacuum ah, laga bilaabo sled-dhaqameedka, xaaqinka, ilaa gacanta iyo sidoo kale qaar ka mid ah 2 in 1. Halkan ka ogow moodooyinka ugu fiican ee Rowenta vacuum cleaners.
Calaamad kale oo isticmaalayaasha badankoodu yaqaaniin oo sidoo kale la mid ah tayada. Waxay khibrad ballaaran u leeyihiin suuqa waxayna haystaan ​​taageerada macaamiisha, maadaama ay tahay calaamad ay dad badani ku sharxayaan sababtoo ah waxay og yihiin inay helayaan badeecad tayo leh. Waxay soo saaraan noocyo badan oo nadiifiye vacuum ah (broom, sledge, handheld, warshadaha...), halkan waxaad ka arki kartaa Bosch vacuum cleaners doorbiday isticmaalayaasha.
Magaca waxaa laga yaabaa inuusan dad badan u aqoon, laakiin waa shirkad khibrad u leh qaybta. Intaa waxaa dheer, karcher vacuum cleaners Waxay u taagan yihiin samaynta nadiifiyeyaal aad u awood badan oo had iyo jeer bixiya waxqabad weyn. Markaa haddii aad raadinayso nadiifiyaha faakuumka kaas oo awooddu ay tahay qodobka ugu muhiimsan, waa mid ka mid ah noocyada ay tahay in la tixgeliyo. Waxay sidoo kale soo saaraan noocyo badan (warshad, dambas, baabuur, sledge ...).
Waa calaamad ay qayb weyn oo ka mid ah macaamiishu sidoo kale yaqaaniin. Guud ahaan sababtoo ah waa shirkad alaabteedu u taagan tahay tayadooda iyo waxqabadkooda wanaagsan waqti ka dib. Markaa iibso vacuum nadiifiye dysson ah sidoo kale waa dammaanad iyo ikhtiyaar badbaado leh oo loo jeedsan karo marka la raadinayo vacuum cleaner. Waxay soo saaraan noocyo kala duwan oo nadiifin ah (sledge, warshadaha, gacanta, xaaqinka...).
In kasta oo Ecovacs vacuum cleaners Way cusub yihiin, runtu waxay tahay in nidaamkooda marin-hawleedkooda, software-ka iyo qiimaha tartanka ay ka dhigeen mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee kuwa raadinaya qalabka nadiifiyaha ee robot-ka. Haddii aad xiisaynayso inaad iibsato mid, ha ka waaban inaad eegto moodooyinka shirkaddan.
Sida loo doorto nadiifiyaha vacuum
Markaad iibsanayso nadiifiyaha nadiifiyaha ah waa inaad xisaabta ku dartaa faahfaahin taxane ah. Maadaama sidan oo kale aan ku gaari karno go'aan si sax ah oo qumman oo aan ka cabsaneynin iibsashada qaabka khaldan. Laakiin, waa muhiim in la tixgeliyo dhammaantood oo aan ka fikirno mar walba waxa dhabta ah ee aan raadineyno. Waxaasoo dhan waxay ka dhigi doonaan raadintayada mid aad u fudud. Maadaama ay muhiim tahay in laga fekero nadiifiyaha faakuumka inuu yahay maalgalin gurigaaga, ma rabto inaad iibsato alaab aan daboolayn baahidaada.
Faahfaahin kale oo aad muhiim u ah markaad dooranayso nadiifiyaha vacuum waa awood. Mar kasta oo aan akhrino tilmaamaha nadiifiyaha nadiifiyaha ah waxaan aragnaa in awoodda la tilmaamay. In kasta oo ay muhiim tahay in lagala tashado, waa in aan lambarkaas u qaadannaa tilmaam. Ma aha wax had iyo jeer noo sheega haddii moodalku ka awood badan yahay.
Waxaa jira moodallo in warqadda ku qoran ay leeyihiin awood yar oo dhab ahaantii ay si fiican u hamiyaan. Sababtaas awgeed, way wanaagsan tahay inaan ku xisaabtano tirada ay inta badan ka sheegaan awoodda, laakiin waa inaan u qaadannaa inay muujinayso awooddooda dhabta ah.
Waxa na xiiseeya waa in nadiifiyaha nadiifiyaha ahi uu awood badan yahay. Maadaama sidaan oo kale aan awoodno inaan ku dhameyno wasakhda iyo boodhka guriga ku urursan si degdeg ah oo raaxo leh. Laakiin, sidoo kale ma rabno nadiifiyaha faakuumka oo aad u xoog badan. Sababtoo ah tani waxay keenaysaa inay ku dhegto dhammaan noocyada dusha sare. Fikrad ahaan, nadiifiyaha vacuum wuxuu leeyahay nidaamiye koronto. Sidan ayaan ku ogaan karnaa awoodda aan rabno inaan isticmaalno iyadoo ku xiran xaaladda.
Guud ahaan, nadiifiyeyaasha xadhkaha goostay (kuwa ku xidhan badhanka dhexe) ayaa ka xoog badan kuwa ku shaqeeya baytari. Markaa waa tafatiran in lagu xisaabtamo. Tani macnaheedu maaha inay ka wanaagsan yihiin, sababtoo ah nadiifiyeyaasha batari ku shaqeeya ayaa sidoo kale si fiican u nuugaya. Laakiin waxaa muhiim ah in aan taas ka warqabno oo aan tixgelinno si faahfaahsan.
Waxaa jira tafaasiil kale oo wax badan naga caawin kara marka la dooranayo mid ka mid ah vacuum cleaner mid kale. Kuwani waa dhinacyo laga yaabo inaysan la mid ahayn muhiimada awooda ama astaanta, laakiin sidoo kale saameyn ku leh habka go'aanka. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaan maskaxda ku hayno.
Maneuverability iyo sahlanaanta isticmaalku waa muhiim. Waxaan rabnaa inaan awoodno inaan si raaxo leh ugu wareegno guriga mar walba. Uma baahnid inaad jiidato faakuumka nadiifiyaha ama inay aad u culus tahay. Sidoo kale in aanu kaa dhamaan inta aanu isticmaaleyno. Sidaa darteed, noocyada noocan ah waa in la hubiyaa. Gaar ahaan in aanay kugu cuslayn, haddii kale hawsha nadiifinta guriga ayaa aad uga sii adkaan doonta sidii hore.
Dayactirka iyo nadiifinta nadiifiyaha faakiyuumku sidoo kale waa faahfaahin kale oo lagu xisaabtamayo. Mar haddii aan rabno wax aan waqti badan u baahnayn. Haddii aan haysano deebaaji, wax ay moodooyinka intooda badani haystaan, nadiifinta iyo dayactirka waa sahlan yihiin. Kaliya ka saar taangiga, faaruqi oo qoy si aad uga saarto wasakhda hadhay. Hawl fudud oo qaadanaysa dhawr daqiiqo oo keliya. Intaa waxaa dheer, waanu kaydinnaa maadaama aynaan u baahnayn inaan iibsano bacaha.
Noocyo badan ayaa leh iftiin iyo tilmaame batari. Kuwani waa tafaasiil dheeri ah oo naga caawin kara inaan ka dhigno isticmaalka vacuum cleaner si aad waxtar u leh. Waxay shaki la'aan yihiin dhinacyo togan oo faa'iido leh. Inkasta oo aanay ahayn ama aanay ahayn inay noqdaan kuwo go'aan qaadasho leh. Ugu yaraan maaha haddii ay taasi ka dhigan tahay qiimaha nadiifiyaha nadiifiyaha ah ayaa sarreeya.
Faahfaahin kale oo muhiim ah haddii ay dhacdo inaad iibsato nadiifiyaha nadiifiyaha leh fiilada, waa inaad tixgeliso dhererka fiilada. Maadaama laga yaabo inay aad u gaaban tahay tanina waxay kugu xaddidaysaa wax badan wakhtiga aad nadiifinta samaynayso. Sababtoo ah mar kasta oo aad bedesho qolalka waa inaad mar kale ka saartaa. Markaa fiilada dheer waa ikhtiyaar aad u raaxo badan ficil ahaan.
Nadiifiyayaasha maanta waxay leeyihiin filtarrada. Nooca filtarku waa shay aanay dad badani u fiirsan, laakiin waa tafaasiil aad u muhiim ah. Sababtoo ah waxay u horseedi kartaa kaydka weyn ee lacagta iyo dayactirka. Markaa waa muhiim inaan hubino nooca shaandhada uu leeyahay nadiifiyaha aanu raadinayno.
Tan ugu caansan maanta waa inay leedahay shaandhada HEPA. Waa nooc ka mid ah filtarrada kaas waxay nuugtaa wasakh badan. Laakiin sidoo kale, si fudud ayaan u nadiifin karnaa si aad u sii wadato isticmaalkeeda muddo dheer. Intaa waxaa dheer, habka loo nadiifiyo shaandhada noocan ah waa mid aad u fudud. Waa in aan qoyno, oo aan engegno oo aan ku celinaa nadiifiyaha vacuum. Nidaam fudud.
Waxaan sidoo kale haysanaa filtarrada iftiinka buluuga ah, oo ku jira noocyada qaar ka mid ah nadiifiyeyaasha faakuumka sida kuwa biyaha. Sidoo kale waa la nadiifin karaa oo waxay yeelan karaan awood nuugista oo sareysa. Marka lagu daro caawinta nadiifinta hawada. Laakiin waxay ku xaddidan yihiin qaar ka mid ah noocyada vacuum cleaners oo gaar ah.
Nadiifiyeyaasha kale waxay leeyihiin filtarrada aan shahaadada HEPA haysan. filtarrada noocaan ah lama nadiifin karo, sidaas darteed waqti ka waqti waxaa nalagu qasbay inaan bedelno. Wax aan ku raaxaysan isticmaalayaasha. Intaa waxaa dheer, waa lacag lumis ah oo aan loo baahnayn xaalado badan.
Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in aan la tashano nooca shaandhada uu leeyahay nadiifiyaha. Maadaama shaandhada aan nadiifin karno ay noogu habboon tahay.
Macquul ahaan, qiimuhu sidoo kale waa faahfaahin aad muhiim ugu ah isticmaaleyaasha. Maadaama ay ku xiran tahay miisaaniyadeena waxaan leenahay xad gaar ah waxaana laga yaabaa inay jiraan noocyo aan awoodin. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aan ogaano noocyada ku jira gacantayada, gaar ahaan noocyada qaar ka mid ah nadiifiyeyaasha faakuumka.
Haddii aad raadinayso vacuum nadiifiyaha robot, qiimuhu inta badan wuu ka sarreeyaa moodooyinka caadiga ah. Sidoo kale, xaalado badan oo ka badan 400 euro. Inkasta oo ay jiraan noocyo leh moodooyin ka badan 200 oo Yuuro. Markaa waa maalgashi muddo dheer ah, maadaama ay muddo dheer jiraan. Laakiin, waa muhiim in laga fikiro.
Waxaa jira faakuum nadiifiye caadi ah oo qiimayaal ah. Waxaan ka heli karnaa nadiifiyeyaasha faakuumka qiyaastii 80-90 euro oo na siinaya tayo wanaagsan. Inkasta oo kuwa ugu badan ay tahay inay ku kacayaan wax ka badan 100 euro, inta u dhaxaysa 100 iyo 200 euro waxaan ka heleynaa moodooyinka ugu badan ee suuqa. Kala duwan oo ay ku jiraan kala duwanaansho laakiin aan ku socon karno si raaxo leh.
Ma jiraan wax ku qanciya?
Haddii aanad helin nadiifiye ku habboon waxa aad raadinayso, waxaanu hubnaa inaad ka heli doonto xulashada alaabta soo socota:
Soo hel dhammaan nadiifiyeyaasha vacuum ee jira 🙂
Qaar ka mid ah noocyada gaarka ah, sida warshadaha ama nadiifiyaha vacuum qoyan, qiimuhu inta badan waa xoogaa ka sarreeya. Inkastoo aysan jirin kala duwanaansho weyn. Laakiin waa muhiim inaad ogaato waxa dhacaya, si aad uga fogaato yaabab aan fiicnayn mustaqbalka. Qaybta wanaagsani waa in noocyo badan oo magacyo ah ay soo saarayaan moodallo la awoodi karo. Si ay ugu fududaato dhammaan isticmaalayaasha inay galaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku badbaadiso iibsashada nadiifiyahaaga cusub, waxaa jira dhacdooyin inta lagu jiro sanadka oo aan ka heli karno dalabyo aad u wanaagsan. Maalmahan waxaa ka mid ah:
Jimcaha Madow ee nadiifiyaha vacuum
Cyber ​​​​Isniinta ee nadiifiyaha vacuum
Maalinta ugu muhiimsan ee nadiifiyaha vacuum
Sidaa darteed, waxaan ka helnaa nadiifiyeyaasha faakuumka raqiis ah suuqa. Waxaa jira moodallo qiimahoodu ka bilaabmo qiyaastii 60 euro xaaladaha qaarkood. Laakiin, badi waxay ku jiraan qaybta u dhaxaysa 100 iyo 200 euro. Waxa wanaagsan ayaa ah in tayada nadiifiyaha faakuumka maanta ay sareeyso. Markaa xitaa moodooyinka qiimahoodu ka hooseeyaan 100 euro ayaa ku siin doona waxqabad wanaagsan.
Nadiifiyeyaasha Vacuum Day Prime Day
Nadiifiyeyaasha Fasaxa ee Cyber ​​​​Isniinta
Jimce madow nadiifiyeyaasha faakuumka
nadiifiyaha faakuumka jaban 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka